AMAGAMA AMANINGI EJAMANI, AMAJalimane amaningi
Isihloko Sezinqwaba Zezinkulumo ZaseJalimane (Isihloko Seziningi)
OKUDLULILEKO OKUDLULILEKO OKULANDELAKO IRHELO LEENHLOKO
Ifomu lesiJalimane eningi, uhlobo oluningi
Umumo obonisa inani elilodwa lamagama uyifomu elisebunyeni lelo gama. Ukwenza isibonelo, amagama anjengekhompyutha, incwadi kanye nohlobo lomuntu kuyizinhlobo zobunye zebizo. Ukukhombisa amabizo angaphezu kwelilodwa, kusetshenziswa ubuningi bebizo. Isibonelo, amagama afana namakhompiyutha, izincwadi, abantu baningi.
NgesiTurkey, ukuguqula ibizo elisebunyeni libe yifomu yobuningi, kufakwa igama elifanele ekugcineni kwalelo gama.
NgesiJalimane, noma kunjalo, awukho umthetho oqondile onganikezwa ngokujwayelekile. Ngenkathi igama ngalinye lingaba amagama azimele komunye nasebunyeni nasebuningini, kungenzeka futhi ukuthi kusetshenziswa amagama afanayo kuwo womabili asebunyeni nasebuningini. Kwesinye isikhathi ubuningi bebizo bungatholakala ngokungeza izijobelelo ekugcineni kwegama.
Njengoba imithetho ethile ingenakunikezwa ekwakheni ubuningi ngesiJalimane, amagama kufanele akhunjulwe kanye nobuningi.
Umthetho okuwukuphela kwawo okungabekwa ekwakhiweni kobuningi eJalimane ukuthi izindatshana zawo wonke amagama ubuningi “ziyafa”Kungakhathalekile ubulili noma i-athikili yegama elitholwe kulelo fomu, ubuningi balelo gama liyasetshenziswa “ngombhalo we-die ik. Lokhu kusebenza ekusetshenzisweni kwendatshana ethile. Yize lesi simo sehlukile ezihlokweni eziqinisekile, kulula impela.
Yilokho; Izihloko ezithandekayo (ein-eine) azisetshenziselwa ubuningi.
Ngakolunye uhlangothi, izindatshana ezingezinhle (i-kein-keine) zisetshenziswa kuphela ngokuthi “keine çoğ esisekelweni.
Masisekele lokhu ngenhla ngezibonelo;
U-der Vater (ubaba) ———————— die Väter (ubaba)
die Mutter (Umama) ——————— die Mutter (omama)
das Mädchen (ingane yentombazane) ———— die Mädchen (ingane yentombazane)
Njengoba kungabonakala kulezibonelo ezingenhla, amagama athi ell der, das, die ik asetshenziswa ngokuthi “die çoğ in ubuningi.
I-ein Bus (ibhasi) ——————— Amabhasi
ein Freund (umngani) Fre- Freunde (abangane)
U-ein Kellner (isikhonzi esisodwa) ————- Kellner (ababekezeli)
eine Lampe (isibani) I-Lamp- Lampen (izibani)
u-eine Mutter (ongumama) —————— Mutter (omama)
Njengoba kubonakala ezibonelweni ezingenhla, izindatshana ze-ik ein ”nezithi“ eine ”azisetshenziswanga kwesobuningi.
Igama lisetshenziswe yedwa.
kein Buch (hhayi incwadi) e keine Bücher (hhayi izincwadi)
Kein Kellner (hhayi umlindi) ————— keine Kellner (hhayi abalindi)
i-keine Lampe (hhayi isibani) ————- keine Lampen (hhayi izibani)
keine Mutter (hhayi umama) e keine Mutter (hhayi omama)
Njengoba kubonakala ezibonelweni ezingenhla, u- "kein" no "keine kullanılır asetshenziswa kuphela ngokuthi" keine da ekwisiningi.
Nakuba umthetho othile ongeke unikezwe ngobuningi, sizohlola imithetho eminingi yobuningi bezakhiwo ukuze kube lula.
Ngale ndlela, uzokwazi ukufaka amagama amaningi ngokwakho.
Safunda ukuhlukaniswa okuyingqayizivele-ngobuningi ngezibizo zesiJalimane, futhi safunda indlela yokuhumusha amagama aseJalimane. Uma ufisa, ungabheka ezinye izifundo zethu noma ubuke isihloko segama lesiJalimane.
Incazelo yelimi lwesiJalimane
Ulimi lwesiJalimane ngesimo senkulumo
Tags: 10. isilasi lesiJalimane izibizo eziningi, 10. inkulumo yesi-German yesifundo, 9. isilasi lesiJalimane izibizo eziningi, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, izilimi eziningi zesiJalimane, izibizo eziningana ngesiJalimane, Izibizo zesiJalimane eziningi, iningi, uhlobo oluningi lwamagama aseGerman